Usoro oge maka ụlọ akwụkwọ ahụ iji gbaa | Foto ndị na-acha agba agba maka nbudata
Usoro oge maka agba agba
N'ụzọ dị mwute, ọ bụ naanị oge ụfọdụ ka a na-anụ ọkụ n'obi a, ma ọ bụ ya mere anyị ji chọọ inye aka na mkpali anyị na-eji eme ihe.
Chọgharịa site na nhọrọ nke oge dị iche iche maka nbudata n'efu. Mee ka nwatakiri gị họrọ motif kachasị amasị ha, bipụtapụta ụdị template a, wee mee ka nwatakịrị gị na-edecha usoro ihe osise ha.
Akwụkwọ edemede na nọmba
Oge nhazi oge maka nka
Biko kpọtụrụ anyịma ọ bụrụ na ị na-achọ ihe osise pụrụ iche pụrụ iche nke nwere ihe pụrụ iche. Anyị nwekwara obi ụtọ ịmepụta mpempe akwụkwọ nkeonwe gị dịka nkọwa gị sitere na foto. Ọ bụghị naanị maka dinosaur ọzọ.